Ukukhuphela simahla i-Unchched: Ingqokelela kaNathan Drake kunye nohambo kwiPS4 | Iindaba zeGajethi
Ukhuphelo lwasimahla olungafakwanga: Ingqokelela kaNathan Drake kunye nohambo kwiPS4
Sinezinto ezininzi "zobumbano" kumashishini amakhulu, kwaye oku ndikuthetha kumanqaku okucaphula kuba akukho lahleko konke konke kubo, nangona Kuyancomeka ukuba basenze ezona ndawo zintle zokuvalelwa kunye neenkonzo okanye umxholo wasimahla. Kufuneka kuqatshelwe ukuba imvelaphi yala manyathelo iya kuhlala ikukutsala abathengi ababengenabo ngaphambili kwaye ngoku ngenxa yengxaki abavavanya iinkonzo zabo (ngakumbi kwimeko yeenkonzo zokusasaza), ngokuqinisekileyo uninzi lwazo luphela Ukuhlawula kutheni uthandile.
Isikhululo sokudlala wenza eyakhe indima ngokubhengeza eli nyathelo Dlala ekhaya, aya kuthi ngawo anike bonke abadlali be PS4 nge-4 yeyona midlalo ilungileyo kwikhathalogu yayo: Unchched: Ingqokelela kaNathan Drake (imidlalo emithathu yokuqala kuthotho) kunye nohambo. Eli nyathelo, kwelinye icala, lizinikele ekudalweni kwe- Izigidi ezili-10 zeedola ukuxhasa ii-studio ezizimeleyo abasebenza no-Sony.
Dlala ekhaya kunye nezihloko ezi-4 zamahhala
Unchched: Ingqokelela yeNathan Drake kunye nohambo luya kufumaneka ixesha elilinganiselweyo ngokukhuphela ngokwedijithali ukusuka ngo-Epreli 16 ngo-01: 00 ukuya kuMeyi 6, 2020 ngo-02: 00 nango-Epreli 15 ngo-10: 00: 5 de kube ngoMeyi 11 ngo-00: 2. U-Sony uqinisekisile ukuba wakube ukhuphele imidlalo ungayigcina ngokungenammiselo, kubasebenzisi baseJamani nase China bayakufumana iKnack XNUMX endaweni ye Unchched: Ingqokelela kaNathan Drake. Yeyiphi eyona nto imbi kakhulu ukuze sizifumane ngengoma emazinyweni ...
"Abantu kwihlabathi liphela benza into elungileyo ngokuhlala ekhaya ukunceda ukusasaza i-COVID-19," ucacisile uJim Ryan, umphathi we-Sony Interactive Entertainment. "Sinombulelo ongazenzisiyo kuye wonke umntu ngokuziqhelanisa nokuziphatha kude kwaye sithatha uxanduva lwethu njengeqonga lokuzonwabisa ekhaya, kungoko sizocela uluntu lwethu ukuba luqhubeke nokwenza isigqibo esifanelekileyo kwaye sidlale ekhaya," uqhubeke watsho. "Njengoko enkosi kuye wonke umntu owenza eyakhe indima ukunciphisa ifuthe, uSony oSebenzisayo oLonwabisayo ukubhengeza inyathelo lokuDlala eKhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Ukhuphelo lwasimahla olungafakwanga: Ingqokelela kaNathan Drake kunye nohambo kwiPS4